Soo dejisan iSkysoft Toolbox 6 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: iSkysoft Toolbox
Qalabka iSkysoft – oo ah qalabka software-yada si loo maareeyo xogta qalabka ku saleysan Android iyo macruufka. Nidaamku wuxuu awood u leeyahay inuu beddelo xogta xafiiska, sawirada qaabab kala duwan, muusikada ama fiidiyowga fiidiyowga, farriimaha, xiriirada iyo xogta kale ee u dhaxeeya aaladda iyo PC. Qalabka iSkysoft wuxuu kuu oggolaanayaa inaad abuurto nuqullo nuqul ah oo noocyada kala duwan ee faylasha ah oo aad horay u soo koobi kartid dhammaan qaybaha nuqullada noocaan ah intaadan bilaabin soo kabashada. Nidaamka dhismaha ee dib-u-helidda nidaamkan wuxuu caawimaad ku soo celinayaa qalabka si caadi ah, iyada oo ay ugu wacan tahay xalka dhibaatooyinka nidaamka ugu badan, sida barafka, dhibaatooyinka la soo jeediyo ama dib-u-dhiska joogtada ah. ISkysoft Toolbox waxay awood u leedahay in ay maraan qatarta shaashada, waxay soo celisaa xogta lumay, casriyadaha nadiifka ah ee faylasha aan loo baahnayn iyo si joogto ah u tirtira xogta sababo la xariiro asturnaanta. Software sidoo kale waxay taageertaa gudbinta xogta noocyo kala duwan oo ka mid ah qalab halbeegga ah, ie, wareejinta faylasha u dhexeeya iOS iyo Android.
Wareejinta xogta qaabab kala duwan
Soo celinta iyo soo kabashada
Qalabka shaashadda ayaa xiran
Soo celinta xogta luntay iyo nadiifinta qashinka
Xallinta dhibaatooyinka nidaamyada iOS
Wareejinta xogta hal qalab ilaa mid kale
Soo dejisan iSkysoft Toolbox
Faallo ku saabsan iSkysoft Toolbox
iSkysoft Toolbox Xirfadaha la xiriira